Ebɛnadze Nye Enuma?
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Bété Cambodian Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Cuba Mmum Kasa Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French Futuna (East) Ga (Nkran Kasa) German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lari Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mexico Mmum Kasa Mfantse Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Mmum Kasa Nahuatl (Central) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Mmum Kasa Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tatar Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
Ana Minhyira Mo Nkwa Do Mma Nyankopɔn na Wonnuma Me?
1. Sɛ egye ber sũa buukuu yi a, ibia ebɛn asɛm na ibosusu ho?
BUUKUU a irusũa yi ama ehu Bible mu nokwasɛm ahorow tse dɛ, Nyankopɔn n’anohoba a ɔfa onnyiewiei nkwa ho, tsebea a ewufo wɔ mu nye owusoɛr ho enyidado no. (Ɔsɛnkafo 9:5; Luke 23:43; John 5:28, 29; Nyikyerɛ 21:3, 4) Ibia ahyɛ ase dɛ erokɔ Jehovah Adasefo nhyiamu ahorow no bi na egye dzi dɛ, hɔn na wɔrosom Nyankopɔn wɔ nokwar mu. (John 13:35) Bi so a ahyɛ ase nye Jehovah rinya anyɛnkofa a no mu yɛ dzen na esi gyinae dɛ epɛ dɛ esom no. Ntsi, ibia ibosusu dɛ, ‘Ebɛnadze na ɔsɛ dɛ meyɛ ndɛ ama meetum asom Nyankopɔn?’
2. Nna ebɛnadze ntsi na Ethiopianyi no pɛ dɛ wonuma no?
2 Iyi nye dza Ethiopianyi ɔbarimba bi a ɔtsenaa ase wɔ Jesus n’aber do no susui. Wɔ Jesus no wusoɛr ekyir ber tsiabaa bi no, no suanyi Philip kãa asɛm no kyerɛɛ dɛm ɔbarimba yi. Philip maa ohun dɛ, nna Jesus nye Messiah a wɔabɔ no ho anohoba no. Dza Ethiopianyi no sũae no kãa n’akoma yie ma ntsi, amonmu hɔ ara no ɔkãa dɛ: “Hwɛ, nsu nye yi: ebɛnadze na osiw m’enuma ho kwan?”​—Ndwuma 8:26-36.
3. (a) Ebɛn ahyɛdze na Jesus dze maa n’ekyidzifo? (b) Ebɛn kwan do na ɔsɛ dɛ wonuma obi?
3 Bible no kyerɛkyerɛ pefee dɛ, sɛ epɛ dɛ esom Jehovah a, ɔsɛ dɛ wonuma wo. Jesus kãa kyerɛɛ n’ekyidzifo dɛ: “Hom nkɔ nkɛyɛ amanaman nyina m’esuafo, na hom nnuma hɔn.” (Matthew 28:19) Bio so, Jesus maa wonumaa no dze yɛɛ nhwɛdo maa hɛn. Wɔammfa nsu ammpetsepetse ne tsir do, na mbom wɔdze ne nyimpadua nyina nuu nsu mu. (Matthew 3:16) Ndɛ no, sɛ worunuma Christiannyi so a, ɔsɛ dɛ wɔdze ne nyimpadua nyina nu nsu mu.
4. Ebɛnadze na w’enuma ma afofor hu?
4 Sɛ wonuma wo a, ɔma afofor hu dɛ epɛ dɛ ebɛyɛ Nyankopɔn ne nyɛnko na esom no ankasa. (Ndwom 40:7, 8) Ntsi ibia ibebisa woho dɛ, ‘Sɛ mepɛ dɛ wonuma me a, ebɛnadze na ɔsɛ dɛ meyɛ?’
NYIMDZEE NA GYEDZI HO HIA
5. (a) Ansaana wobonuma wo no, ebɛnadze na ɔsɛ dɛ idzi kan yɛ? (b) Ebɛnadze ntsi na Christianfo nhyiamu ho hia?
5 Ɔsɛ dɛ ihu Jehovah nye Jesus na isũa hɔn ho adze ansaana woeenuma wo. Etu iyi ho anamɔn dadaw dze nam Bible no a irusũa no do. (Kenkan John 17:3.) Naaso, iyi ara a ebɛyɛ no nndɔɔ sõ. Bible no kã dɛ, ɔsɛ dɛ ema Jehovah “ne pɛ ho nyimdzee” hyɛ wo mã. (Colossaefo 1:9) Nhyiamu ahorow a Jehovah Adasefo yɛ no bɔboa wo ma enye Jehovah eenya ebusuabɔ a no mu yɛ dzen. Iyi nye siantsir kor ntsi a ɔsɛ dɛ ekɔ dɛm nhyiamu ahorow no bi daa no.​—Hebrewfo 10:24, 25.
Ɔsɛ dɛ isũa Bible no ansaana woeenuma wo
6. Bible no mu nsɛm dodow ahen na ɔsɛ dɛ ihu ansaana woeenuma wo?
6 Ɔyɛ nokwar dɛ, Jehovah nnhwehwɛ dɛ ihu dza ɔwɔ Bible no mu nyina ansaana woeenuma wo. Nna ɔnnhwɛ kwan dɛ Ethiopianyi no bohu biribiara ana woeenuma no. (Ndwuma 8:30, 31) Yɛbɔkɔ do esũa Nyankopɔn no ho adze daa. (Ɔsɛnkafo 3:11) Naaso sɛ wobonuma wo a, ɔsɛ dɛ ihu Bible mu mfitsiase nkyerɛkyerɛ no na egye to mu.​—Hebrewfo 5:12.
7. Ebɛn kwan do na Bible no a esũa no aboa wo?
7 Bible no kã dɛ: “Gyedzi nnyi mu a, obi nntum nnsɔ [Nyankopɔn] enyi.” (Hebrewfo 11:6) Dɛm ntsi, ɔsɛ dɛ inya gyedzi ana woeenuma wo. Bible no ma yehu dɛ, nna nyimpa binom wɔ tsetse kurow Corinth mu a wɔtsee asɛm a Jesus n’ekyidzifo no kãe no, na dza ofii mu bae nye dɛ, “wɔgyee dzii, ma wonumaa hɔn.” (Ndwuma 18:8) Dɛmara so na Bible no a esũa no aboa wo ma enya gyedzi wɔ Nyankopɔn n’anohoba ahorow nye tum a ɔwɔ Jesus no werdam no mu a obotum agye hɛn efi bɔn nye owu mu no mu.​—Joshua 23:14; Ndwuma 4:12; 2 Timothy 3:16, 17.
KÃ BIBLE MU NOKWASƐM KYERƐ AFOFOR
8. Ebɛnadze na obekenyan wo ma aakã dza esũa no ho asɛm akyerɛ afofor?
8 Aber a ekɔ do sũa pii fi Bible no mu na ihu mbrɛ ɔboa wo wɔ w’asetsena mu no, wo gyedzi bɔkɔ do ayɛ kɛse. Ebɛpɛ dɛ ekã dza irusũa no ho asɛm kyerɛ afofor. (Jeremiah 20:9; 2 Corinthfo 4:13) Woana na ebɛpɛ dɛ ekã bi kyerɛ no?
Ɔsɛ dɛ gyedzi kenyan wo ma ekã dza egye dzi no ho asɛm kyerɛ afofor
9, 10. (a) Woananom na ibia ibotum ahyɛ ase akã dza esũa no ho asɛm akyerɛ hɔn? (b) Sɛ epɛ dɛ enye asafo no bɔ mu yɛ asɛnka edwuma no a, ebɛnadze na ɔsɛ dɛ eyɛ?
9 Ibia ebɛpɛ dɛ ekã dza irusũa no ho asɛm kyerɛ w’ebusuafo, w’anyɛnkofo, w’efipamfo anaa w’edwumamufo. Dɛm a ebɛyɛ no ye, naaso ɔsɛ dɛ eyɛ dɛm wɔ ɔdwe na ɔdɔ kwan do aber nyina. Ewiei koraa no, ibotum ahyɛ ase nye asafo no abɔ mu ayɛ asɛnka edwuma no. Ber a etse nkã dɛ ayɛ krado no, ibotum akã ho asɛm akyerɛ Ɔdasefo a ɔnye wo sũa Bible no, dɛ epɛ dɛ enye asafo no bɔ mu yɛ asɛnka edwuma no. Sɛ ohu dɛ ayɛ krado na sɛ w’abrabɔ nye Bible gyinapɛn ahorow hyia a, nna ɔnodze asafo mu mpanyimfo beenu nye hom bɔbɔ mu ehyia.
10 Ebɛnadze na ɔbɔkɔ do wɔ dɛm nhyiamu no ase? Mpanyimfo no nye wo bedzi nkɔmbɔ ahwɛ dɛ etse Bible mfitsiase nkyerɛkyerɛ ase na egye to mu anaa. Afei so, wɔbɔhwɛ dɛ edze dza Bible no kã no dzi dwuma wɔ wo da biara da asetsena mu na ɔyɛ ampaara dɛ epɛ dɛ ebɛyɛ Jehovah Adasefo no mu kor anaa. Ma ɔntsena w’adwen mu dɛ, mpanyimfo no na wɔhwɛ asafo no mufo a ɔwo so kã ho bi no do. Ntsi, ɔnnsɛ dɛ isuro dɛ enye hɔn bedzi nkɔmbɔ. (Ndwuma 20:28; 1 Peter 5:2, 3) Wɔ nhyiamu yi ekyir no, sɛ ibotum nye asafo no abɔ mu ayɛ asɛnka edwuma no a, mpanyimfo no bɛkã ho asɛm akyerɛ wo.
11. Ebɛnadze ntsi na ohia paa dɛ eyɛ nsesã ahorow ansaana etum nye asafo no abɔ mu ayɛ asɛnka edwuma no?
11 Ibia mpanyimfo no bɛkã akyerɛ wo dɛ, ɔsɛ dɛ eyɛ nsesã ahorow bi ansaana etum nye asafo no abɔ mu ayɛ asɛnka edwuma no. Ebɛnadze ntsi na ohia paa dɛ eyɛ nsesã ahorow a ɔtse dɛm? Osiandɛ, sɛ yɛkã Nyankopɔn ho asɛm kyerɛ nkorɔfo a, ɔkyerɛ dɛ yegyina Jehovah n’ananmu. Ntsi, ɔsɛ dɛ yɛdze hɛn abrabɔ hyɛ no enyimnyam.​—1 Corinthfo 6:9, 10; Galatiafo 5:19-21.
NYA NNUHO NA DAN WOHO
12. Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ nyimpa nyina nu hɔnho?
12 Adze fofor bi wɔ hɔ a ɔsɛ dɛ eyɛ ansaana woeenuma wo. Ɔsomafo Peter kãa dɛ: “Hom nnu homho, na hom ndan homho, ma wɔaapepa hom bɔn efi hom ho.” (Ndwuma 3:19) Wɔkã nnuho a, ɔkyerɛ dɛn? Dza ɔkyerɛ nye dɛ, yebedzi yaw ankasa wɔ bɔn bi a yɛayɛ ho. Dɛ nhwɛdo no, sɛ eyɛ obi a ebɔ edwamanbra a, nna ɔnodze ɔsɛ dɛ inu woho. Sɛ abɔ mbɔdzen a ɔsen biara dɛ ebɛyɛ dza ɔtsen wɔ w’asetsena nyina mu mpo a, no ho da ho ara hia dɛ inu woho, osiandɛ hɛn nyina yɛyɛ bɔn na ɔsɛ dɛ yɛserɛ Nyankopɔn hɔ bɔnfakyɛ.​—Romefo 3:23; 5:12.
13. Sɛ wɔkã dɛ ‘dan woho’ a, ɔkyerɛ dɛn?
13 Aso nu a ibonu woho kɛkɛ wɔ dza ayɛ nyina ho no dɔɔ sõ? Oho. Peter kãa dɛ, ɔsɛ dɛ esan so ‘dan woho.’ Iyi kyerɛ dɛ, ɔsɛ dɛ igyaa wo nkan abrabɔ biara a omuo no na ehyɛ ase yɛ dza ɔtsen. Sɛ yɛbɛyɛ mfatoho a, fa no dɛ ɔyɛ ber a odzi kan a irutu kwan akɔ bea pɔtsee bi. Ekyir yi a w’enyi baa woho do no, nna afom kwan. Ebɛnadze na nkyɛ ebɛyɛ? Ekyingye biara nnyi ho dɛ, ibesie abotar na aasan w’ekyir akɛfa ɔkwan papa no do. Dɛmara so na sɛ irusũa Bible no a, ibohu suban anaa ndzeyɛɛ ahorow bi wɔ w’abrabɔ mu a ɔsɛ dɛ eyɛ nsesã wɔ ho. Nya ɔpɛ no dɛ ‘ebɛdan woho,’ kyerɛ dɛ, ebɛyɛ nsesã ahorow a ohia no na aahyɛ ase ayɛ dza ɔtsen.
HYIRA WOHO DO MA JEHOVAH
Ana abɔ Jehovah anohoba dɛ ebɔsom no?
14. Ebɛyɛ dɛn ehyira woho do ama Nyankopɔn?
14 Anamɔn fofor a ohia dɛ itu ansaana woeenuma wo nye dɛ, ibehyira woho do ama Jehovah. Sɛ ibehyira woho do ama Jehovah a, ɔsɛ dɛ ebɔ mpaa dze bɔ no anohoba dɛ, ebɔsom ɔno nkotsee na ebɛma ne pɛ a ebɛyɛ no ayɛ ehiadze tsitsir wɔ w’asetsena mu.​—Deuteronomy 6:15.
15, 16. Ebɛnadze na okenyan obi ma ohyira noho do ma Nyankopɔn?
15 Sɛ ebɔ Jehovah anohoba dɛ ebɔsom ɔno nkotsee a, ɔtse dɛ mbrɛ abɔ obi a edɔ no anohoba dɛ enye no bɛtsena wo nkwa nda a wɔaka nyina mu. Susu ɔbarimba na ɔbaa bi a wɔdze hɔnho ahyɛ nantsew a odzi awar enyim mu no ho hwɛ. Ɔdɔ a ɔbarimba no wɔ ma ɔbaa no mu yɛ dzen ber a ɔkɔ do nye no nantsew na ohu no yie no. Afei, onya ɔpɛ dɛ ɔbɔwar ɔbaa no. Ɔwɔ mu dɛ, iyi yɛ gyinaesi a enyiber wɔ mu dze, naaso osian ɔdɔ ntsi, ɔbarimba no wɔ ɔpɛ dɛ ɔbɛgye asodzi a ɔtse dɛm ato no ho do.
16 Aber a ekɔ do sũa Jehovah no ho adze pii no, ibenya ɔdɔ ama no na eenya ɔpɛ dɛ ebɛyɛ dza ibotum biara dze asom no. Iyi bekenyan wo ma aabɔ mpaa dze abɔ no anohoba dɛ ebɔsom no. Bible no kã dɛ, sɛ obi pɛ dɛ odzi Jesus n’ekyir a, “ma ɔmpa noho” ekyir. (Mark 8:34) Iyi kyerɛ dɛn? Ɔkyerɛ dɛ, ɔsɛ dɛ ema setsie a ebɛyɛ ama Jehovah no yɛ adze tsitsir wɔ w’asetsena mu. Jehovah ne pɛ a ebɛyɛ no ho hia sen wo botae ahorow nye ndzɛmba a wankasa epɛ.​—Kenkan 1 Peter 4:2.
MMA NNSURO DƐ IBEHYIRA WOHO DO
17. Ebɛnadze ntsi na nyimpa binom mmpɛ dɛ wohyira hɔnho do ma Jehovah?
17 Nyimpa binom mmpɛ dɛ wohyira hɔnho do ma Jehovah, osiandɛ wosuro dɛ, sɛ wɔbɔ no anohoba a, worunntum nndzi do. Wɔmmpɛ dɛ wɔbɛdaadaa Jehovah anaa ibia wobosusu dɛ, sɛ wonnhyiraa hɔnho do mmaa Jehovah a, nna ɔnodze worummbu dza wɔbɛyɛ biara ho akontaa nnkyerɛ no.
18. Ebɛnadze na ɔbɔboa wo ma eedzi suro biara a ewɔ dɛ ebɛma Jehovah ne nsa esi famu no do?
18 Ɔdɔ a ewɔ ma Jehovah bɔboa wo ma eedzi suro biara a ewɔ dɛ ebɛma ne nsa esi famu no do. Osiandɛ edɔ no ntsi, ebɛyɛ dza ibotum biara dɛ ibedzi anohoba a abɔ no no do. (Ɔsɛnkafo 5:4; Colossaefo 1:10) Iyi nnkɛma esusu da dɛ, Jehovah ne pɛ a ebɛyɛ no yɛ dzen dodoodow. Ɔsomafo John kyerɛɛw dɛ: “Nyankopɔn dɔ nye yi, dɛ yebedzi n’ahyɛdze do: na n’ahyɛdze no nnyɛ dzen.”​—1 John 5:3.
19. Ebɛnadze ntsi na ɔnnsɛ dɛ isuro dɛ ibehyira woho do ama Jehovah?
19 Ɔnnsɛ dɛ eyɛ nyimpa a odzi mu ana eehyira woho do ama Jehovah. Ɔnnhwehwɛ dza yerunntum nnyɛ mmfi hɛn hɔ da. (Ndwom 103:14) Noara bɔboa wo ma aayɛ dza ɔtsen. (Isaiah 41:10) Fa wo werɛ nyina hyɛ Jehovah mu na “ɔno na ɔbɛkyerɛ wo w’akwan.”​—Mbɛbusɛm 3:5, 6.
BAGUAMU MPAAMUKÃ A ƆKƆ NKWAGYE MU
20. Sɛ ihyira woho do ma Nyankopɔn wie a, ebɛn anamɔn na odzi hɔ a ɔsɛ dɛ itu?
20 Aso etse nkã dɛ ayɛ krado dɛ ibehyira woho do ama Jehovah? Sɛ ihyira woho do ma Jehovah wie a, nna wɔaka anamɔn a odzi hɔ a ɔsɛ dɛ itu. Ɔsɛ dɛ wonuma wo.
21, 22. Ibesi dɛn ayɛ baguamu “paa mu kã” a ɔda wo gyedzi edzi?
21 Bɔ w’asafo no mu mpanyimfo ntamu nkitahodzifo no amandzɛɛ dɛ, ehyira woho do ama Jehovah na epɛ dɛ wonuma wo. Ɔbɛma mpanyimfo binom nye wo esusu Bible mu mfitsiase nkyerɛkyerɛ ho. Sɛ wɔgye to mu dɛ ayɛ krado a, wɔbɛkã akyerɛ wo dɛ, wobotum enuma wo wɔ Jehovah Adasefo ɔmansin anaa ɔmantɔw ehyiadzi a odzi hɔ no ase. Wɔbɛma ɔkasa dze akyerɛkyerɛ dza enuma kyerɛ mu wɔ ehyiadzi no ase. Afei, ɔkasafo no bɛma hɔn a wɔayɛ krado dɛ wobonuma hɔn no ebua nsɛmbisa ebien a ne ntseasee nnyɛ dzen. Dɛm nsɛmbisa yi a ibeyi ano no yɛ baguamu “paa mu kã” a ɔda wo gyedzi edzi.​—Romefo 10:10.
22 Afei, wobonuma wo. Wɔdze wo nyimpadua nyina bonu nsu mu. Enuma no bɛma obiara ehu dɛ, ehyira woho do ama Jehovah na seseiara eyɛ Jehovah Adasefo no mu kor.
DZA W’ENUMA NO GYINA HƆ MA
23. Numa a wonuma obi wɔ “Egya, nye Ɔba, nye Sunsum Krɔnkrɔn dzin mu” no kyerɛ dɛn?
23 Jesus kãa dɛ wobonuma n’esuafo wɔ “Egya, nye Ɔba, nye Sunsum Krɔnkrɔn dzin mu.” (Kenkan Matthew 28:19.) Iyi kyerɛ dɛn? Ɔkyerɛ dɛ egye Jehovah no tumdzi, dwuma a Jesus dzi wɔ Nyankopɔn ne tsirmpɔw mu nye mbrɛ Nyankopɔn dze no sunsum krɔnkrɔn no dzi dwuma dze ma ne pɛ yɛ hɔ no to mu.​—Ndwom 83:18; Matthew 28:18; Galatiafo 5:22, 23; 2 Peter 1:21.
Sɛ wonuma wo a, ɔkyerɛ dɛ epɛ dɛ eyɛ Nyankopɔn ne pɛ
24, 25. (a) Ebɛnadze na enuma gyina hɔ ma? (b) Ebɛnadze na yebosusu ho wɔ tsir a odzi ewiei no mu?
24 Enuma gyina hɔ ma biribi a ohia paa. Sɛ wɔdze wo nu nsu mu a, ɔkyerɛ dɛ ewu ama wo nkan abrabɔ anaa egyaa wo nkan abrabɔ no. Sɛ ifi nsu no mu pue a, ɔkyerɛ dɛ erebɛhyɛ asetsena fofor ase na aayɛ Nyankopɔn ne pɛ. Ɔma yehu dɛ, ofi ndɛ rokɔ no, Jehovah na ebɔsom no. Ma ɔntsena w’adwen mu dɛ, ɔnnyɛ nyimpa, ahyehyɛdze anaa edwuma bi na ehyira woho do ama. Ɔyɛ Jehovah na ehyira wo nkwa do ama no.
25 Woho do a ehyira no bɔboa wo ma enye Nyankopɔn eenya anyɛnkofa a no mu yɛ dzen. (Ndwom 25:14) Iyi nnkyerɛ dɛ, numa a woenuma obi ntsi, obenya nkwagye. Ɔsomafo Paul kyerɛɛw dɛ: “Hom mfa suro nye ahopopo nyɛ homankasa hom nkwagye ho edwuma nwie.” (Philippifo 2:12) Enuma yɛ w’abrabɔ fofor no n’ahyɛse kɛkɛ. Naaso, ibesi dɛn na aakɔ do atwe epin Jehovah? Buukuu yi ne tsir a odzi ewiei no bɛma yeenya asɛmbisa yi ho mbuae.
NOKWASƐM 1: ANA ƆSƐ DƐ WONUMA ME?
“Hwɛ, nsu nye yi: ebɛnadze na osiw m’enuma ho kwan?”​—Ndwuma 8:36
Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ wonuma wo, na ebɛn kwan do na ɔsɛ dɛ wɔfa do yɛ?
Enuma kyerɛ dɛ egyaa wo nkan abrabɔ na ahyɛ abrabɔ fofor ase dɛ ebɛyɛ Nyankopɔn ne pɛ.
Sɛ ibotum asom Jehovah a, ɔsɛ dɛ wonuma wo.
Enuma ma afofor hu dɛ, epɛ dɛ esom Nyankopɔn.
Ɔsɛ dɛ wɔdze wo nyimpadua nyina nu nsu mu dɛ mbrɛ wɔyɛɛ Jesus no.
NOKWASƐM 2: JEHOVAH NNHWEHWƐ DZA IRUNNTUM NNYƐ MMFI WO HƆ DA
“Nyankopɔn dɔ nye yi, dɛ yebedzi n’ahyɛdze do: na n’ahyɛdze no nnyɛ dzen.”​—1 John 5:3
Ebɛnadze ntsi na ɔnnsɛ dɛ isuro dɛ ibehyira woho do ama Jehovah?
Ndwom 103:14; Isaiah 41:10
Ɔnnsɛ dɛ eyɛ nyimpa a odzi mu ana eehyira woho do ama Jehovah. Noara bɔboa wo ma aayɛ dza ɔtsen.
Ɔdɔ a ewɔ ma Jehovah bɔboa wo ma eedzi suro biara a ewɔ dɛ ebɛma ne nsa esi famu no do.
NOKWASƐM 3: ANAMƆN A ƆSƐ DƐ ITU ANA WOEENUMA WO
“Me Nyankopɔn, mepɛ dɛ meyɛ wo pɛ, nyew, wo mbra wɔ m’akoma mu.”​—Ndwom 40:8
Sɛ ibotum ehyira woho do ama Jehovah a, ebɛnadze na ɔwɔ dɛ eyɛ?
SŨA NYANKOPƆN N’ASƐM NO
Ɔsɛ dɛ ihu Jehovah na Jesus Christ. Sɛ ekɔ do sũa hɔnho adze pii a, ɔdɔ a ewɔ ma hɔn no bɛyɛ kɛse.
HYƐ WO GYEDZI DZEN
Ɔsɛ dɛ inya awerɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn n’anohoba ahorow nye tum a ɔwɔ Jesus no werdam no mu a obotum agye hɛn efi bɔn nye owu mu no mu.
Iyi kyerɛ dɛ, ɔsɛ dɛ idzi yaw ankasa wɔ bɔn a ayɛ nyina ho.
Iyi kyerɛ dɛ, ɔsɛ dɛ igyaa adze bɔn biara yɛ na eyɛ dza ɔtsen.
HYIRA WO NKWA DO MA JEHOVAH
Sɛ ebɔ Jehovah anohoba wɔ mpaabɔ mu dɛ, ebɔsom ɔno nkotsee na ebɛma ne pɛ a ebɛyɛ no ayɛ ehiadze tsitsir wɔ w’asetsena mu a, ɔkyerɛ dɛ ehyira woho do ama Jehovah.